Voicemail iPhone feno? Ity ny The Real Fix! - Iphone
ny charger iphone-ko tsy misy sarany
iphone 6s bateria tsy mamaly
ny findaiko milaza fa tsy misy serivisy t finday
very ny fivarotako fampiharana amin'ny findaiko
Voicemail iPhone feno? Ity ny The Real Fix!
Voicemail dia feno amin'ny iPhoneo ary tsy azonao antoka ny antony. Ny menio voicemail dia foana ao amin'ny app Phone, fa ny boaty fampidirana anao dia feno ihany. Ao amin'ity lahatsoratra ity, aho hazavao hoe maninona no feno ny mailakao iPhone ary asehony anao ny fomba fanamboarana ny olana !
Fa maninona no feno ny mailako?
Amin'ny ankabeazan'ny fotoana dia feno ny mailakao iPhone satria mbola voatahiry any an-toeran-kafa ireo mailaka nesorinao tamin'ny iPhone. Matetika, ireo voicemail ireo dia mbola tehirizina miaraka amin'ny mpitatitra anao.
Miantso amin'ny mailakao amin'ny iPhoneo ary milalao ny voicemail anao. Isaky ny faran'ny mailaka tsirairay dia tsindrio ny isa voatondro hamafana voicemail. Hamafana ireo hafatra notehirizin'ny fitateranao izany ary hanafaka toerana ao amin'ny boaty mailakao.
Raha mbola feno ny mailakao dia araho ny torolàlana isaky ny dingana etsy ambany!
Ahoana ny fomba hamafana ny mailaka amin'ny iPhone
Raha mbola tsy nanao izany ianao dia hamafa ireo voicemail izay voatahiry ao amin'ny iPhone-nao ankehitriny. Mba hanaovana izany, sokafy Phone ary tap Voicemail . Avy eo, tap Ovay eo amin'ny zoro havanana ambony amin'ny efijery. Kitiho ny mailaka tianao hamafa.
paompy Mamafa eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny efijery rehefa nisafidy ny voicemail rehetra tianao hamafana.
Hamafana ireo hafatra voafafa rehetra
Na dia mamafa ny voicemailo amin'ny iPhone aza ianao dia tsy voatery ho voafafa tanteraka izany. Ny iPhone dia mamonjy ireo hafatra nofafanao vao tsy ela akory izay, sao sanatria ianao nanao hadisoana ary mamafa ny zava-dehibe iray. Na izany aza, midika izany fa be dia be ny hafatra voafafa afaka manangona sy mameno ny boaty mailakao.
Sokafy ny telefaona ary kitiho ny kisary Voicemail eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny efijery. Mikorisa ambany ary paompy Hafatra voafafa . paompy Clear All eo amin'ny zoro havanana ambony amin'ny efijery. paompy Clear All indray hamafana mandrakizay ireo hafatra nofafanao.
Hamafana ireo voicemail voasakana rehetra
Ireo mailaka avy amin'ireo laharana voasakana dia afaka mandray toerana ao amin'ny boaty mailakao koa. Mpampiasa iPhone maro no tsy mahatsapa fa ny isa voasakana dia mbola afaka mamela hafatra ihany. Ireo karazana hafatra ireo dia tsy hiseho ao amin'ny lisitry ny mailakao, fa mbola afaka mandray toerana tsy fantatrao izy ireo!
Raha hamafana ireo hafatra sakanana dia sokafy ny Telefaona ary paompy Voicemail . Tsindrio eo Hafatra voasakana , avy eo hamafa ireo izay tsy tadiavinao.
Raha mbola feno ny boaty mailakao dia tonga ny fotoana hifandraisanao amin'ny mpitatitra tsy misy tariby. Mety mila miantso ianao ary mamerina mametaka ny boaty mailakao.
ny tanana ankavanana mangidihidy dikany
Ireto ny nomeraon'ny mpanjifa ho an'ireo mpitatitra tsy misy tariby 4 ambony:
Ampahafantaro azy ireo fotsiny fa feno ny mailakao iPhone ary hanampy anao hamaha ny olana izy ireo!
Nahazo Voicemail ianao!
Namboarinao ny olana ary mazava ny boaty mailaka fandefasanao mailaka. Hamarino tsara fa hizara ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy hampianarana ny namanao sy ny fianakavianao ny zavatra tokony hatao rehefa feno ny voicemail iPhone. Avelao ny fanontaniana hafa anananao momba ny iPhone ao amin'ny faritra misy hevitra etsy ambany.